Muqdisho: Xabsiga Dhexe Oo Lagu Qabtay Xuska Maalinta Xuquuqda Aadanaha Aduunka * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho, Mareeg.com: Munaasabada lagu xusayaay maalinta xuquuqda Aadanaha Aduunka oo ku began 10 December oo ay soo qaban qaabisay Wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda Soomaaliya ayaa manta lagu qabtay xarrunta xabsiga Dhexe ee Xamar.
Munaasabadda xuska Maalinta Xuquuqda Aadanaha ayaa waxaa ka qeybgalay mas’uuliyiin ka tirsan labada gole ee dowladda, taliska ciidanka Asluubta Soomaaliyeed saraakiil iyo qeybaha kala duwan ee bulshadda.
Munaasabadda ayaa kooxda fanaaniinta Onkod ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed kusoo bandhigeen riwaayad la magac baxday “Xanaanada Maxbuuska iyo Xaq-dhowrka Aadnaha”.
Ugu horeyn waxaa halkaasi hadal ka jeedisay Asli Cismaan Ducaale oo ka socotay hay’adaha udooda xuquuqda aadanaha oo sheegtay in qofka bani’aadamka ah uu u baahanyahay in xuquuqdiisa uu helo.
“Xabsiga waa meel lagu saxo qofka dhibta uu banaanka ka soo geestay, teeda kale waa in ay ogaadaan marka xabsiga la keeno in ay meeshan tahay meel lagu saxo” ayay tiri Asli Cismaan Ducaale.
Garyaqaan Cismaan Cilmi Guuleed oo ah garyaqaanka Qaranka Soomaaliyeed ayaa sheegay in qofka bani’aadamka ah uu xaq fara badan leeyahay, islamakaana laga maarmaan ay tahay in intaasoo dhan loo dhameystiro.
“Qofk beni’aadamka waxa uu leeyahay xaquuq aas aasi ah sida xaga caafimaadka, nabadgelyada sidoo kale qofku waxa uu xaq u leeyahay in uu si xor ah u noolaado” ayuu hadalkiisa ku daray.
Xildhibaan Muuse Sheekh Cumar oo ah gudoomiye ku xigeenka gudiga xuquuqul insaanka ,haweenka iyo arrimaha bani’aadanimada ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa tilmaamay in dastuurka dalka qodobo ka mid ah ay qeexayaan xuquuqda qofka bani’aadamka ah uu leeyahay.
“Dasuurka Jamhuuriyada Federaalka qodobka 10-42 waxa uu in badan ka hadlayaa dhawrista xaquuqda aadanaha, teeda kale bandhiga maanta Wasaaradda cadaaladda ay soo bandhigtay waxa ay ka turjumeysaa dhawrista xaquuqda” ayuu Xildhibaan Muuse hadalkiisa ku daray.
Wasiirka Wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda Soomaaliya Mudane C/laahi Abyan Nuur ayaa shaaca ka qaaday in wixii hadda ka dambeeya aanan jiri doonin maxaabiis laga sii daayay xabsiga oo magaalada lagu siideynayo, Wasaaradana ay biloowday shaqooyin loogu abuurayo maxbuuska xabsiga laga sii daayo.
“Wasaaraddu waxay ku talo gashay in maxaabiiista loo sameeyo mashruucyo kala duwan gaar ahaan sidii inta ay xabsiga ku jiraan tababaro loo siin lahaa, taasi oo ah mid mustaqbalka maxbuuska dhisaysa” ayuu hadalkiisa ku daray.
Dhinaca kale, Ergeyga gaarka ah ee Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya, Danjire Mahamat Saleh Annadif ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in AMISOM ay ka go’an tahay ilaalinta xuquuqda aadanaha, gaar ahaan tan dadka dulman ee ku nool Soomaaaliya.
Annadif ayaa sheegay in AMISOM ay siineyso dadka dhibaateysan goobo ammaan ah oo ka madax-bannaan rabshado iyo cabsi galin, taas oo qeyb weyn ka ah qorshaha ilaalinta xuquuqda aadanaha.
Ergeyga wuxuu sheegay in AMISOM ay si aad u dhow ugala shaqeyn doonto hay’adaha ammaanka ee Soomaaliya sidii loo abuuri lahaa jawi nabadeed iyo deegaan ammaan ah, si ay meesha uga baxaan dadka doonaya in ay ku xad-gudbaan xorriyadda shacabka Soomaaliyeed.
Annadif ayaa tilmaamay in ciidamada AMISOM ay helaan tababarro joogta ah oo ku aaddan ilaalinta sharciyada caalamiga ah ee ilaalinta xuquuqda aadanaha, iyadoo dhammaan howlaha AMISOM ay ka muuqdaan nidaamka ilaalinta xuquuqda aadanaha.